Happy Birthday သားသားလေးရေ..
အမေတူလေးမို့ ချောတာထင်ပါရဲ့ နော် :P
ညီလေးက ဖအေတူလို့ဖြစ်မယ် လူချောပဲဗျ
Happy Birthdayး)
အောက်ဆုံးပုံလေး ယူသွားတယ် ချစ်စရာကောင်းလို့ ။
ပျော်ရွှင်တဲ့ မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေ။
အမေချစ်လား၊ အဖေချစ်လား မသိ။
နွေးထွေးပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုလေး ဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။
Happy Birthday ပါကလေးရေ...
Happy Birthday သားသား!!
ကလေးလေးက ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်။
မမိုးချိုသင်းက ... အမေတူလေးမို့ ချောတာထင်ပါရဲ့ နော်တဲ့..
မောင်မျိုးက ... ဖအေတူလို့ဖြစ်မယ် လူချောပဲဗျ
သားသားက အမေ နဲ့တူတာလား အဖေ နဲ့တူတာလား.. နှစ်ယောက်လုံးနဲ့ တူတာလား..
သားသားရဲ့အမေ နဲ့အဖေ နှစ်ယောက်လုံးကို မမြင်ဘူးလို့ဘယ်သူနဲ့တူမှန်း မမှန်းတတ်ဘူး။ ဘယ်သူနဲ့ တူလဲ ပြောပြပါ..
ံHappy Birthday !!! ပါ ..
အဖေ နဲ့ အမေ အတွက်...အား...
တိုင်း ပြည် အတွက် ..အား..
အနာဂတ် ရဲ့ သားကောင်း ရတနာ လေး ဖြစ်ပါစေ....
HAPPY BIRTHDAY ပါ သားသား ရေ.
အနာဂတ်အတွက်ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ သားကောင်းရတနာလေးဖြစ်ပါစေလို့ တီတီဝါ ကဆုတောင်းပေးသွာပါတယ်နော်။
အားကိုးရမယ့် ခြင်္သေ့ သားလေးဖြစ်ပါစေ.။
အမေတူလေးမို့ ချောတာနေမှာပါ :P
3 Jan 09, 04:26
htin kyaw: happy birthday to your son
ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ သားသားလေးရေ..
စန်တာကလောခ့်လေး အိပ်နေတာ ကူးထားလိုက်ပါတယ် ချစ်လို့..
အန်တီသီရိ ကလည်း ဆွဲထားတာ တော်လိုက်တာနော်.. :)
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ.. ကလေးလေး...။
သားသားလေး မွေးနေ့ မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျား
သားတော်မောင်လေးကတော့ အထက်ကလေးတွေပဲနေမှာဗျို့ ခလေးအတွက် ပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဗျား
ဒီက ရေစင်က ဓာတ်ပုံလာကြည့်ပြီး
အော်.. ဆင်တာကလော့ Happy New Year တဲ့
HAPPY BIRTHDAY ပါ သားလေး ရေ...
*** အဖေနဲ့တူတာ ဟုတ်လားဟင်...
23 Jan 09, 09:47
YoungGun: ရောက်တယ် 23 ရက်နေ့ဖွားလေးဆိုရင်တော့ ငါးဂဏန်းသမား၊ ခြင်္သေ့အလံတော်သင်္ကေတပေါ့ဗျာ။ ကံကောင်းပါစေ။
23 Jan 09, 10:02
mie nge: Happy Birthday to yr son, ko aungthange!
နဲနဲအရောက်နောက်ကျသွားတယ်၊ သားလေးက ချစ်စရာလေးဘဲဗျ၊ သးလေးအတွက် ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
Happy Birthday သားသားရေ။
HAPPY BIRTHDAY ပါ ကလေးရေ !
အငယ်ဆုံးလေး မွေးနေ့ဆုတောင်း လာရေးတာ နောက်ကျသွားတယ်။
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စရာ အနာဂတ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေ သားသားလေးရေ။
ခလေးတွေကချစ်စရာကောင်းလေ ..ကျနော်တို့ အဖေတွေ ရုန်းကန်ရလေ...သူတို့ အတွက် ငွေရှာရကျိုးနပ်လေပေါ့နော်....
သားတို့ အဖေ ဖြစ်လာမှ-- ကျနော်တို့ ရဲ့ မိဘတွေလည်းကျနော်တို့ အပေါ် မွေးကင်းစမှစလို့ 
ကျနော်တို့ ကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်း..
ငြိမ်းစတမ်း"ဆိုတဲ့လင်္ကာကို ရွတ်မယ်လို့ တထစ်ချယုံတယ်။ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကျနော်လည်း မနေ့ တနေ့ ကမှ ကလေးအဖေ စဖြစ်လာလို့ရွတ်မိလို့ ယုံမိတာဗျို့ ...။အလုပ်ကပြန်လာတာနဲ့ အပြစ်ကင်းတဲ့သားလေးမျက်နှာကို မြင်လိုက်ရင် ရင်ထဲငြိမ်းသွားတယ်ဗျာ..။ကိုဆက်လည်းငြိမ်းမှာယုံပါတယ်။
Happy Birthday ပါသားသားလေးရေ...
ကောင်မလေးတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်မှာတော့ မြင်သေးဗျား။
၁နှစ်ပြည့်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျန်း
သားလေးက ချစ်စရာကောင်းတယ်နော်။ တစ်နှစ်ပြည့် ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်။
Happy Birthday Tar Nge Lay.
ဟက်ပီဘတ်ဒေးပါဗျာ ။ အဖေတူသားလေးထင်ပါရဲ့။ ပျင်းဖို့နဲ့ အိပ်ဖို့နဲ့ တူတာပြောတာပါ
24 Jan 09, 01:08
nml: အငယ်ဆုံးလေးရေ Happy Birthdayပါ
24 Jan 09, 07:41
မောင်ကျည်ပွေ့: သားလေးက ချစ်စရာလေး အမေတူတယ်ထင်ပါ့ :heart:
အပြစ်ကင်းတဲ့ ကလေးဘ၀ဆိုတာကို ပြန်လည် ထင်ဟပ်စေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ပန်းချီးကားလေးပါပဲ။
Happy birthday ပါခင်ဗျာ။
မွေးနေ့ဆုတောင်းက နည်းနည်း နောက်ကျသွားတယ်။
ဟိုလုပ်သည်လုပ်နဲ့ ကွန်မန့်တွေကို reply လုပ်ဖို့ နောက်ကျသွားတာ ခွင့်လွှတ်ကြပါ...း)
ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်း ညီအကို မောင်နှမတွေ အားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ညီမချိုသင်း၊ တူမောင်မျိုး၊ မနော်၊ နေနေနိုင်၊ မေမိုး၊ သက်ဝေ၊ ကလူသစ်၊ မောင်ကျည်ပွေ့ - သားလေးက အမေနဲ့ ပိုတူပါတယ်။
ကိုဝင်းဇော်၊ မမ၊ မ၀ါ၊ မစ်ရာ၊ ညီထင်ကျော်၊ ကိုရင်-ခင်လေးနဲ့ ကလေးလေး၊ ဆင်ဒဏ်လား၊ ကောင်းကင်ကို၊ ကိုမျိုးဝင်းဇော်၊ ကိုဂင်၊ ကိုဧရာ-မသီတာနဲ့ရေစင်၊ မခင်ဦးမေ၊ ယန်းဂန်း၊ မီးငယ်၊ ကမာကြီး၊ ကိုအောင်၊ မြတ်နိုး၊ ကိုအိုင်၊ မပန်၊ ကိုအိုး၊ ကိုဆောင်း၊ အိမ်၊ ပုံရိပ်၊ မကေ၊ nml နဲ့ JulyDream ဆုတောင်းများအတွက် ကျေးဇူးပါ။